XOG:- Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo maalmaha soo socdo ku wajahan dalka Itoobiya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo maalmaha soo socdo ku wajahan dalka Itoobiya
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo ay markale safar deg deg ah ku tagaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa sheegaya in safarka madaxweyne Farmaajo ee Itoobiya uu yimid kadib markii uu warqad deg deg ah ka helay ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn.
12-ka bishaan aynu ku jirno ayaa lagu wadaa in magaalada Addis Ababa uu ka furmo shirka madaxda 7 dal ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD, waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonnaa xaaladda cakiran ee haatan ka jirta Koonfurta dalka Sudan.
Dhinaca kale, safarka madaxweyne Farmaajo ee Itoobiya ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ay ka socdaan howgalo culus oo hub ka dhigis ah, kaas oo ay wadaaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu magac daray xasillinti ammaanka Muqdisho.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Itoobiya ayaa noqonaya kiisa labaad uu dalkaasi ku taggo tan iyo markii xilka loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.